Shirki Brusells ee Arimaha Soomaaliya oo soo dhamaaday. – Hornafrik Media Network
Shirki Brusells ee Arimaha Soomaaliya oo soo dhamaaday.
By HornAfrik	 On Jul 17, 2018
Hornafrik-waxaa gelinkii danbe ee maanta soo idlaaday shirkii ka socday magaalada Brusells ee dalka Bilgium-ka loogana hadlayay arimaha Soomaaliya.
Shirka oo socday labo maalmood waxaa ka qeybgalay 58-dowladood oo taageera Soomaaliya iyo 6-hey’adood oo caalami ah.
Waxaa looga hadlay arimaha Amniga ,Siyaasadda ,dhaqaalaha iyo horumarinta Soomaaliya.
Madaxweynaha Soomaaliya , Ra’iisal wasaare ku xigeenka dalka , wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo xubo ka socda ururada bulshada rayidka ah ayaa ka qeybgalay.
Inta badan madaxweynayaasha maamul goboleedyada ayaa dhaliilay dowladda dhexe intii shirka uu socday , waxana ay dowladda sheegtay in horumar laga gaaray arimaha laga hadlayay loona baahanayahay taageero.
Madaxweyne Farmaajo oo gebagabada shirka ka hadlay ayaa diiradda saaray amniga iyo dhaqaalaha waxaana uu madaxweynaha sheegay in hormar laga samegay amniga , ciidamada la isku dhafayo , xasilooni siyaasadeed la abuurayo islmarkaana ay wadaan kobcinta dhaqaalaha oo la dhiiro gelinayo maalgashiga dalka.
Qodobo ka kooban 79 aya laga soo saaray shirka waxaana madaxda Soomaalida lagu dhiiro geliyay in ay wada shaqeeyaan amniga iyo dhaqaalaha na la hormariyo.
Wasaaradaha Kaluumeysiga Maamul Goboleedyada Oo Hakiyey Wadashaqeyntii W/Kaluumeysiga XFS.
Amaanka Muqdisho oo qaab cusub loo dhowrayo.